OITNB အတွက် 2016 Netflix မူရင်း Premiere နေ့ရက်များ၊ Kimmy Schmidt - Netflix သတင်း
၂၀၁၆ လိမ္မော်အတွက် Netflix ၏မူရင်း Premiere နေ့ရက်များသည်လူသစ်များ၊ Kimmy Schmidt နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။
ဂျက်စီကာဂျုံးစ်ရာသီ2တရားဝင်ဖြစ်ပျက်နေသည်! Netflix ရှိအကောင်းဆုံး Disney ရုပ်ရှင် ၂၀
Netflix သည်လိမ္မော်ရောင်သည် New Black Season 4၊ Unbreakable Kimmy Schmidt Season 2, Grace and Frankie Season2နှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်၎င်းတို့၏ Netflix မူရင်းအမြောက်အများကို 2016 ခုနှစ်တွင်လာမည့်နေ့ကိုကြေငြာခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ဆောင်းရာသီရုပ်မြင်သံကြားဝေဖန်သူများအသင်းမှသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် Netflix ကသူတို့၏ Netflix မူရင်းပြပွဲဆယ်ခုအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ပြသမည်သို့မဟုတ်ရာသီသစ်များဖြန့်ချိမည့်နေ့ကိုကြေညာခဲ့သည် IGN ။
ပုံမှန်အတိုင်းဆိုလျှင် streaming network ကသူတို့ရဲ့ YouTube Channel ကိုလွှင့်တင်ထားသည့် YouTube ၏ဗီဒီယိုတွင်လွှတ်ပေးမည့်ရက်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ဤတွင်ဗီဒီယိုကြည့်ပါ!
မတ် ၁၁ အလွှာ
1ပြီ ၁: မွေးမြူရေးခြံ
Netflix အပေါ် izombie ၏ရာသီ 3
1ပြီ ၁: ပျောက်ဆုံးနှင့်တွေ့ရှိဂီတစတူဒီယို (ကလေးတွေ)
15ပြီ ၁၅: ကျိုးပဲ့လွယ်သော Kimmy Schmidt က ရာသီ 2
မေ ၅: Marseilles
မေ ၆ ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းနှင့် Frankie ရာသီ 2
ဇွန် ၃: စကားလုံးပါတီ
ဇွန် ၁၇: လိမ္မော်ရောင်သည်အနက်ရောင်သစ်ဖြစ်သည် ရာသီ ၄
ဇူလိုင် ၁၅ သူစိမ်းများ
သြဂုတ် ၁၂ - The Get Down
သိသာထင်ရှားတဲ့, ထို 2016 ခုနှစ်တွင်ထွက်လာမယ့် Netflix ကမူရင်းပြပွဲများ၏စာရင်းအပြည့်အစုံမဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်၊ က အိမ်အပြည့်ပဲ reboot, ဖေဖော်ဝါရီလ 26 ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်။ ကဒ်အိမ် နှင့် Daredevil အသီးသီးမတ်လ4နှင့်မတ်လ 18 ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိရန်စီစဉ်ထားရှိပါသည်။
တစ်ချိန်က Netflix သည်အခြားမူရင်းများနှင့်တူသောအခြားမူရင်းကိုထုတ်ပြန်ရန် ပို၍ ရှင်းလင်းသောစိတ်ကူးရှိသည် Bloodline, Sense8, Luke Cage, BoJack Horseman၊ နှင့် 2016 ခုနှစ်တွင်အနည်းငယ်အခြားသူများကိုငါသူတို့ငါတို့အားလုံးကိုသိပါလိမ့်မယ်သေချာပါတယ်။ Netflix ကဒီဖြန့်ချိမည့်ရက်ကိုယနေ့မကြေညာသောကြောင့်၎င်းပွဲများကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချီမည်မဟုတ်ဟုမဆိုလိုပါ။
တနင်္ဂနွေနေ့တွင် 2016 TCA သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ Netflix ကထိုအကြောင်းကိုကြေငြာခဲ့သည် အံ့’s ခြင်းရဲ့ဂျက်စီကာဂျုံးစ် ဒုတိယရာသီအတွက်သက်တမ်းတိုးခဲ့သည်!
ဤ Netflix ၏မူရင်းအားလုံးကိုထုတ်ပြန်ရန်သင်စောင့်နေစဉ် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုရန်အတွက် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ ၏အဆင့်ကိုစစ်ဆေးပါ။
အွန်လိုင်းအမေရိကန်ထိတ်လန့်ပုံပြင်ရာသီ 8 ဇာတ်လမ်းတွဲ4နာရီ
hulu ပေါင်းရာသီ4ရက်နေ့တွင်သေလွန်သောသူတို့သည်လမ်းလျှောက်
ozark ရာသီ 1 ဇာတ်လမ်းတွဲ2recap
kurtwood Smith ကမိသားစုများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်